‘Efa Niteny Taminareo Izahay’: Fidirana Tsy Ara-dalàna Nataon’ny Polisy Federaly Aostraliana Tamin’ny Rakipeon’ny Resaka An-Telefaona an’ireo Mpanao Gazety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Mey 2017 7:20 GMT
Sary natolotry ny Electronic Frontiers Australia (CC BY 4.0)
Ny 28 Aprily, naboraky ny polisy federaly ao Aostralia fa nanitsakitsaka ny lalàna ny iray amin'ireo manamboninahitra ao aminy tamin'ny nidirany tsy nisy didim-pitsaràna tamin'ireo rakipeon'ny mpanao gazety iray.
Nohazavain'ny Kaomisera Andrew Colvin fa tafiditra amin'ny resaka fanadihadiana iray momba ny “famoahana torohay saropady avy amin'ny polisy ho anà mpanao gazety” ilay izy. Hadisoan'olombelona no nolazainy fa tsiny, ary nolaviny ny mety ho fisianà fisomparana. Tsy nampahafantarina momba ilay fiporitsahana ilay mpanao gazety voakasik'izy io.
Takiana amin'ireo mpanome tolotra aterineto sy fifandraisana an-telefaona ny hitahirizany mandritra ny roa taona ny “metadata” momba ireo mpampiasa azy — torohay momba izay olona ifandraisany, ary oviana — samy ao ny aterineto sy telefaona. Amin'izao fotoana izao, tsy maintsy mahazo didim-pitsaràna ireo izay mampihatra ny lalàna raha maniry ny hiditra amin'ny “metadata” momba ny fifandraisan'ireo mpanao gazety. Ho an'ny mpanao gazety ihany ho manankery io fiantohana io — tsy manana io fiarovana io ny mpanjifa hafa.
Ny politikan'ny fitahirizana ny angondrakitra ao Aostralia, araka ny namaritana azy ao amin'ny tranonkalan'ny Lehiben'ny Fampanoavana, dia mamaritra ny angondrakitra ho toy ny “torohay momba ny fifandraisana iray, fa tsy ny vanimpotoana na ny votoatin'ilay fifandraisana.” Ho an'ny antso, tafiditra amin'izany ny “laharan'ny telefaonan'ireo olona mifampiresaka ary ny halavan'ny fotoana nifampiresahan'izy ireo—fa tsy izay nolazainy.” Ho an'ny imailaka, “ny angondrakitra dia torohay toy ny adiresy imailaka marim-pototra sy ny fotoana nandefasana azy—fa tsy ny votoatin'ilay imailaka na ny fotokevitra fonosiny.”
Ny tranonkala iraisampirenena mpanome vaovao teknolojika, CNetT, dia niray feo tamin'ireo feo maro tety anaty aterineto nanipika hoe efa nasaina nitandrina ny rehetra :
Soraty ity iray ity ho an'ny boky fanoratana ny resaka fiarovana, eo ambany toko antsoina hoe “Efa Niteny Taminareo Izahay.”
[…] Efa nananontanona ny fanitsakitsahana goavana ny angondrakitra hatramin'ny niresahana ireo lalàna tany am-boalohany, niaraka tamin'ireo mpanakiana nampitandrina hoe ny famoronana andianà “metadata” iray ho an'ny Aostraliana tsirairay manana telefaona na afaka miditra aterineto dia fangaro iray ho an'ny fanitsakitsahana goavana ny angondrakitra, na fijirihana goavana.
Ny fanitsakitsahana voamarina androany dia niseho tapabolana monja taorian'ny nidiran'ireo lalàna hanan-kery. Tany am-piandohana dia tamin'ny fomba ofisialy no nanolorana azy ny antenimiera, teo ambanin'ny fanevan'ny fiarovam-pirenena sy fisorahana ny fametavetana zazakely ary ny ady amin'ny herisetra ateraky ny rongony, vetivety ireo mpanakiana ilay politika dia nampibaribary ny adihevitra manodidina ireo olan'ny fanarahamaso faobe, ny fidirana amin'ireo angondrakitra voatahiry ary ny fampiasàna azy ho aminà raharaha sivily, toy ny fanenjehana ho manao asa fijirihana.
Ny vaovao ara-teknolojia ao Aostralia, iTWire, nangataka ny hanaovana hetsika:
…tokony hisy fanadihadiana vaovao amin'izao fotoana izao momba ny ambaindain'ny fitahirizana angondrakitra ho entin'[ny Polisy Federaly Aostraliana] manao hetsika.
Paul Murphy, tale jeneralin'ny sendikà MEAA , izay miaro ireo mpanao gazety sy ireo mpiasa hafa amin'ny media ao Aostralia, dia gaga tamin'ilay fanambaràna :
Ny fampiasàna ireo “metadata” an'ny mpanao gazety dia ezaka hamantarana ny zava-miafina momba ireo mpanome vaovao sy ireo hafa izay mamboraka ny olana ao amin'ny governemanta. Ity ohatra farany indrindra ity, mampiseho fa ny fomba firoso diso marisika loatra sy mandeha irery hiditra amin'ny “metadata” an'olontsotra dia manimba ny zo hànana fiainana manokana sy ny zon'ireo mpanao gazety hiasa miaraka amin'ireo mpanome vaovao miafina.
Misy ihany koa ao amin'ny media sosialy fanehoankevitra manohitra mafy, indrindra fa avy amin'ireo mpanakiana ilay rafitra fitahirizana ny angondrakitra. Nisy ny ahiahy hoe ambonin'ny lalàna ry zareo polisy, mazàna dia ny AFP no tondroina amin'izany (aoka tsy ho afangaro amin'ilay masoivohom-baovao frantsay) satria tsy miatrika fanenjehana ireo manampahefana voakasika. Nibitsika i William Tinkle hoe:
rehefa tsy ao anatin'ny AFP ianao no mahazo zavatra amin'ny fomba tsy araka ny lalàna dia halatra no iantsona an'izay ary dia ho henjehina
Ny hafa nizara ny ahiahin-dry zareo hoe ny fanamarinana voalohany ny fitahirizana angondrakitra sy fidirana aminy, izany hoe fampiharana ny lalàna momba ny fiarovam-pirenena sy ny ady amin'ny rongony, dia nampiasaina hifehezana ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety :
Nomena toky ny tsirairay fa hoe momba ny resaka fiarovam-pirenena ireo lalànan'ny “metadata”. Androany, fantatsika fa ampiasain'ny AFP izy ireny mba hamantarany izay mpanome vaovao ny gazety #auspol
Alaivo sary ao an-tsaina raha mazoto ny polisy hisambotra mpay metaveta ankizy/mpanondrana olona/mpandraharaha rongony amin'ny fampiasàna ny #Metadata #auspol
Mpibitsika iray no nitney ho an'ny Polisy Federaly, maneho ny fanaovana tsinontsinona ireo haino aman-jery any amin'ny faritra maro any:
Amim-pahatsorana no ilazako fa aleoko kokoa mino ny polisy federaly toy izay ny mpanao gazety!
Aleo izany hilentika any!
Nisy ny tsy fifampitsitsiana teo amin'ny ankolafy rehetra:
Fanairana: na iza na iza manaporitsaka vaovao dia hohazaina amin'ny alàlan'ny fampiasàna ny “metadata”. Ny teboky ny tantara tsangana omaly [nolalaovin'ny polisy federaly]
Nandritra izany fotoana izany ny Electronic Frontiers Australia (EFA) dia nanomboka fanangonana sonia nitakiana ny ‘hanànana taratasy fanamarinana eken'ny rehetra ho fidirana amin'ireo angondrakitry ny fifandraisandavitra notehirizina':
Ny fanambaràna tamin'ny herinandro lasa … dia mampiseho tsy fahampiana tanteraka amin'ny fiarovana mahomby omen'ny lalàna amin'izao fotoana izao.
Misy vaovao tsara sasantsasany momba ny ady mikasika ny “metadata” miaraka amin'ny namoahan'ny governemanta federaly didy manaisotra ny fanitarana ny fidirana amin'ny “metadata” ho aminà raharaha sivily. Noharabain'ny EFA ilay fanapahankevitra :
Fandresena iray manandanja io.
Na dia fanitàrana voafetra aza no nomen'ny governemanta ho amin'ilay fidirana, dia efa azo lazaina ho mety fiandohanà andiam-panitarana marobe tahaka azy.
Niaiky ny polisy fa tsy afaka ny ‘tsy ho hita’ ireo angondrakitra tafaporitsaka. Tsy mbola mazava na ny ho fanekena eny amin'ny fitsaràna ireo porofo azo tamin'ny fomba tsy araka ny lalàna aza.